Ungazihlela kanjani ukuze ufunde izifundo ezahlukahlukene | Ukwakheka kanye nezifundo
UMaite Nicuesa | 12/01/2022 10:32 | Amathiphu
Ucwaningo luthola imibono eyahlukene kuye ngohlobo lomsebenzi. Lapho umfundi engena ku-syllabus yesifundo asithandayo, ujabulela izinga eliphakeme kunalapho efunda okuqukethwe akuthola kunzima. Kodwa noma kunjalo, inhlangano ingenye yezihluthulelo zempumelelo ukuze kuzuzwe izinhloso zocwaningo phakathi nesifundo. Kanjani hlela ukufunda izifundo eziningi? Sikunikeza amathiphu kokuthunyelwe.
1 1. Indlela yokunquma inani lesikhathi esifundweni ngasinye
2 2. Sebenzisa amasu okufunda ukuze akusize ubuyekeze
3 3. Bhala amaphuzu amahle
4 4. Ukufunda nsuku zonke futhi njalo
5 5. Izinsuku zokuhlolwa
6 6. Oda indaba
1. Indlela yokunquma inani lesikhathi esifundweni ngasinye
Kunenkomba okufanele isetshenziswe ekusebenzeni. Chitha amaminithi engeziwe ufunda futhi ubuyekeze izifundo ezethula izinga eliphezulu lobunzima. Okubhekwa njengokuyinkimbinkimbi kubonakala kuyinkimbinkimbi nakakhulu lapho isikhathi sokufunda kuhlehliselwa kamuva. Ungakugwema kanjani ukuthi lesi simo siphindaphindiwe kaningi? Ngokwesibonelo, qala ntambama noma ekuseni ngesihloko odinga ukunikela kuso isikhala esengeziwe.
2. Sebenzisa amasu okufunda ukuze akusize ubuyekeze
Ukubuyekeza kubalulekile uma uhlaziya izihloko ezihlukene ngesikhathi esifanayo. Lawo masu okufunda akusiza ukuthi ubuyekeze imiqondo esesihlaziyiwe ibalulekile ukuze uqinise ukufunda. I-Schematics, amamephu emibono, nezifinyezo ziyasebenza. Kodwa futhi ukudwebela njengoba, ngokuhlela imibono esemqoka yombhalo, uyithola kalula.
3. Bhala amaphuzu amahle
Thatha uhlu lwezinsiza ezizohambisana nawe ngesikhathi sohlelo lwakho lokufunda. Amanothi ahambisana kahle nezihloko eziyingxenye yezincwadi. Amanothi agcizelela imiqondo eyinhloko nawo ayisihluthulelo sokufeza ukubukeza. Ngakolunye uhlangothi, kuyanconywa ukuthi ufunde kwezakho izichasiselo.
4. Ukufunda nsuku zonke futhi njalo
Kunephutha lenhlangano elikhiqiza imiphumela engemihle esikhathini esifushane nesikhathi eside: ukushiyelwa kocwaningo usuku olwandulela ukuhlolwa. Kodwa-ke, ukugcina izifundo ezimbalwa zisesikhathini kubalulekile ukugcina ukungaguquguquki kuwo wonke amasonto. Ungasithola kanjani isikhathi nesikhala sesifundo ngasinye? Yenza ikhalenda futhi ubone ngeso lengqondo ukuhlela kokugcina ukuze ulindele isimiso ezinsukwini ezimbalwa ezizayo. Leli khalenda kufanele livumelane nezimo futhi livulekele izinguquko ezingase zibe khona. Khumbula ukuthi inhlangano iwukufunda lapho ungasebenzisa khona izinguquko ezingase zibe khona.
Luthini uhlelo lwakho lwanamuhla? Ungayihlehli kuze kube kusasa.
5. Izinsuku zokuhlolwa
Cabangela izici ezehlukene lapho uhlela ucwaningo. Okokuqala, khomba ukulandelana kwezinto ezibalulekile futhi udale inhlangano ehambisana nalokho okulindelekile. Ngokolunye uhlangothi, izinsuku zezivivinyo ngokwazo zithola ukuhlobana okukhethekile ohlelweni. Ngokwesibonelo, ezinsukwini ezingaphambi kovivinyo oluzayo, gxila kakhulu endabeni.
6. Oda indaba
Ukutadisha izifundo ezihlukahlukene kudinga ukuhlela isikhathi esifanele. Inhlangano eyisihluthulelo sokwenza uhlelo lokusebenza oluhlelekile. Indlela yokwenza lula inqubo yokufunda? Indawo kufanele ihambisane nezidingo zomfundi. Nakekela izinto zokufunda futhi uhlele amanothi ezifundo ezahlukene.
Ikhabethe lezincwadi liyifenisha ebalulekile yokuqedela ideski nokwakha isimo sokugxila. Ngale ndlela, endaweni eseduze netafula ungathola imithombo yolwazi okudingeka uthintane nayo.
Futhi yini okufanele uyenze uma ucabanga ukuthi awusenaso isikhathi esanele sokufunda zonke izifundo? Ngakho-ke, ungapheli amandla kubo bonke. Nquma ukuthi iyiphi inhloso ofuna ukugxila kuyo nokuthi kungani. Misa i-oda lakho lezinto eziza kuqala.
Ungazihlela kanjani ukuze ufunde izifundo ezahlukahlukene?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » Uzihlela kanjani ukuze ufunde izifundo ezahlukahlukene